Bakistaan oo xidhay waalidiin diiday in ay caruurtooda ka talaalaan cudurada khatarta ah sida dabaysha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Bakistaan oo xidhay waalidiin diiday in ay caruurtooda ka talaalaan cudurada khatarta ah sida dabaysha
Islamabad–Dawlada Bakistaan oo dagaal toosa hadda la gashay argagixisada Talibaan ayaa xidhay waalidiin diiday in caruurtooda laga talaalo cudurada halista ah ee caruurnimada sida dabaysha oo dalka Bakistaan faroba,an ku haysa. Argagixisada Talibaan iyo kooxo diimeedyada kale ayaa dilla dadka u adeega hay’adaha talaalka iyagoo aaminsan fikir aan la garanayn oo xagjira.
Shaqaalaha talaalka ee dawlada iyo kuwa aan dawlad ahayn ayaa hadda lagu ilaaliyaa qoryo si ay hawshooda u gutaan sida aad ku aragtaan sawirka hoose oo muujinaya shaqaale gudanaya waajibkiisa oo qori lagu ilaaliyo.
Argagixisada caalamiga ah oo xalaashatay dhiiga musliminta ayaa hadda keentay in macalimiinta Bakistaan la baro sida loo qaato qoryaha layskuna difaaco haddii argagixisada Talibaan soo weerarto. Cudurka dabaysha oo aafeeyay dalka Bakistaan ayaa hay’ada caafimaadku sheegtay in dadka soo baxaya lagu talaalo madaarada si ayna u qaadsiin dadka kale.
Masaajida Bakistaan ayaa inta badan gaadh laga qabtaa iyadoo lag baqayo in argagixisada Talibaan isku qarxiyaan. Bakistaan ayaa qabatay waalidin gaaraya ilaa 471 iyadoo dawladu sheegtay in ay dagaal ku qaaday cudurka dabaysha cidii talaaliwaydana jeel loo taxaabayo, kaliya la sii daynayo marka ay talaalaan.